Umenzi wesithombe-skrini ne-BitMedic AntiVirus, iyathengiswa isikhathi esilinganiselwe | Ngivela kwa-mac
Umenzi wesithombe-skrini ne-BitMedic AntiVirus, iyathengiswa isikhathi esilinganiselwe
NgoLwesibili okunikezwayo eSoy de Mac, ukuthi lapha nsuku zonke sibheka okungcono futhi ngentengo engcono yeMac yakho, sijabulela impilo engcono kakhulu, ukusebenza okuhle kakhulu nawe, wonga ama-euro ambalwa. Kulokhu sibuyela emthwalweni ngohlelo olusha oluletha uphawu lwe-Movavi, kumayelana UMenzi wesithombe-skrini: Thatha futhi uhlele izithombe zesikrini, ngaphezu kwethuluzi elihle lokugcina iMac yakho nakho konke okugcinwe kuyo kuphephile, I-BitMedic AntiVirus - Ukuphepha kwe-Malware ne-Adware.
Khumbula ukuthi, ngaphandle kokunye okuhlukile engizokukhombisa ngokufanele, kusuka kimi ngivela eMac singaqinisekisa lokho kuphela Lokhu kunikezwa kusebenza ngesikhathi sokushicilela lokhu okuthunyelwe Kodwa-ke, into ejwayelekile ukuthi asazi ukuthi zizoba zinde kangakanani ngoba onjiniyela abavamise ukuxhumana nalolo lwazi. Ngakho-ke, uma unentshisekelo kunoma yikuphi kokufaka okulandelayo okunikezwayo, iseluleko sami ukusithenga bese usifaka ku-Mac yakho. Ngakho-ke ungakuzama ngokuthula kwengqondo futhi, uma kungenzeka kungabi yilokho obekulindele, unga buyisela bese ubuyisa lokho okukhokhele. Mina angiveli kwa-Mac futhi angihlangene nakancane nalezi zinhlelo zokusebenza, nabathuthukisi bazo noma neminikelo abayiphakamisile. Ngabe sizoxaka?
1 UMenzi wesithombe-skrini: Thatha futhi uhlele izithombe zesikrini
2 I-BitMedic AntiVirus - Ukuphepha kwe-Malware ne-Adware
UMenzi wesithombe-skrini: Thatha futhi uhlele izithombe zesikrini
Siqala ngethuluzi eliwusizo kakhulu, ikakhulukazi kulabo abenza izifundo zewebhu. Ingabe mayelana UMenzi wesithombe-skrini, isicelo esivumela thina bamba, hlela, gcina futhi ugcine konke okwenzekayo esikrinini se-Mac yethu. Yebo, ngiyazi ukuthi ukuthatha izithombe-skrini ku-Mac kuyinto entofontofo ngempela, elula futhi esheshayo (mane ucindezele okhiye abambalwa), kepha ngalolu hlelo lokusebenza ungahlela futhi lezo zithombe-skrini noma uzilondoloze kwenye ifomethi oyithandayo kakhulu.
Emithathu yimisebenzi esemqoka ye- UMenzi wesithombe-skrini uMovavi okwe-Mac:
Ukuthwebula okusheshayo ukhetha indawo nje ofuna ukuyibamba ngenxa yengilazi yayo yokukhulisa nolayini bayo besiqondisi. Ngokungeziwe, "futhi ungakhetha eyodwa yezisetshenziswa zendawo ezisebenzisekayo zokubamba: thatha isithombe-skrini sonke, ingxenye yesikrini, noma indawo yokugcina ekhethiwe."
Ukuhlela okulula yezithombe zakho ngaphambi kokuzilondoloza. Ungasika izithombe, ususe izinto ezingadingeki, ukopishe futhi unamathisele, engeza izinto ezinjengemicibisholo, imigqa nozimele, uqokomise izingxenye ezibaluleke kakhulu bese ufaka izihloko, ezizenzekelayo ngokwezifiso zakho ukuze ukwazi ukulungisa umbala, uhlaka, i-opacity kanye amanye amapharamitha. Futhi, "ungavula futhi uhlele noma yiziphi izithombe-skrini zokugcina ezingama-50 ezithathiwe" ngokubheka nje umlando ezansi kwewindi.
Ukuthunyelwa kwekhwalithi ephezulu kumafomethi athandwa kakhulu, kufaka phakathi i-JPEG, PNG, BMP, TIFF, PCX, TGA nabanye.
UMenzi wesithombe-skrini uMovavi iyithuluzi eliwusizo kakhulu futhi eliphelele manje, njengengxenye yomkhankaso we-Mac App Store Sale, ongathola isaphulelo esingu-90% ngo- € 0,99 kuphela kuze kube kusasa ngoLwesithathu ngo-Ephreli 12 esikhundleni se- € 9,99 ejwayelekile.
I-BitMedic AntiVirus - Ukuphepha kwe-Malware ne-Adware
Isicelo sesibili sokunikezwa kosuku sihlobene nokuphepha kwakho kanye ne-Mac yakho, cishe I-BitMedic AntiVirus - Ukuphepha kwe-Malware & Adware, una "Izinyathelo ezi-XNUMX ezilula zokuvikela i-malware"
IBitMedic ™ ikunikeza okulula okuyizinyathelo ezintathu ukukunikeza ukuphepha okuphezulu futhi ugcine iMac yakho iphephile ekuhlaselweni.
cunt I-BitMedic Singaqiniseka kakhulu ukuthi i-malware nezinsongo zikude kakhulu nekhompyutha yethu, ngezindlela ezintathu:
Ukuskena okugcwele kwe-Mac Inikeza izinketho ezimbili: Ukuskena Okusheshayo, okuskena ngokushesha izindawo ezibucayi kakhulu kwi-Mac yakho, okuvumela ukuthi leli sheke lenziwe kaningi, ne-Deep Scan, ehlola indawo ngayinye ebucayi yezinsongo ezingaba khona.
Ukuskena ngokwezifiso, lapho ungachaza amafayela athile ngokuhudula bese uphonsa.
Ukuqapha Kwezempilo, enikezela nge- "24/7 real-time protection, kuthwetshulwa lonke ushintsho kumafolda abhekiwe."
IMilagros angicabangi ukuthi izokwenza kepha, kulezi zikhathi lapho izinsongo ezibhekene neMac zikhula khona, akukubi ukuthola ukuvikelwa okwengeziwe, ikakhulukazi uma kunjalo ngale ntengo. Ngoba I-BitMedic AntiVirus kuyingxenye yomkhankaso we- «Two Dollar Tuesday» ngendlela yokuthi ungawuthola ngesaphulelo esingu-93% ngo- € 1,99 kuphela esikhundleni sama-euro angu-29,99 ajwayelekile. Kepha shesha!
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Umenzi wesithombe-skrini ne-BitMedic AntiVirus, iyathengiswa isikhathi esilinganiselwe
I-Apple imangalela iSwatch ngokusebenzisa ibheji layo njenge- "Thikha Okuhlukile"
I-beta yokuqala enabashayeli bakaNvidia bamakhadi kaPascal ku-Mac